Uncategorized – Voice of Somalis In Exile
(War) Axad-31/10/2021-Xaruunta tareenada Laga raaco ee Auston Station Ee magaalada london, ayaa gebbi ahaanba waxaa istaagay galabta tareenadda gobollada aadda oo xaruuntaas Ka baxa. Arrintaan ayaa timid Ka dib markii roobab dabaylo wata oo xoog lihi da’een ka dibna sababeen in eey soo ridaan geedo ku dhinac yaalay xadiiska tareenku […]
Jimce, 30th of April, 2021 (London)- Sarkaal boolis Metrabolitan-ka ka tirsan ayaa laguy helay in uu ku kacay falal la xiriira argagixisanimo, misna ka tirsanaa koox argagixasada ah oo jiritaankeeda la mamunuucay ee NEO-NAZI. Binjamin Hannam oo 22-jir ah ayaa lagu xukumay afar sano iyo afar bilood oo xarig ah, […]
Khamiis, 29th of April, 2021 (Mogadishu)- Madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel-gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah hadda ah hogaamiyaha xisbiga Himillo Qaran, isla markaasna ah guddoomiyaha dallada MIDOWGA MUSHARRAXIINTA oo ay ku bahoobeen, musharraxiinta u taagan in eey galaan tartanka madaxtinimada dowladda federaalka ah ee […]
Khamis, 5th of March, 2020 – Amina Wehelie-Markii ugu horeysay taariikhda ayaa kabcada barakeysan, laga saaray dadkii ku cibaadeysanayey. Tallaabadaan ayaa ka dambeeysay ka dib markii dowladda Sacuudigu, amar ku bixisay in dadka laga saaro si gebigeedina Loo buufiyo, taasoo Qeyb ka ah , dagaalka loogu jiro ka hortagga xanuunka […]
Ma jirto dowlad deyn ku leh Soomaaliya, oo balan qaadey deyntii ay lahayd in ay Soomaaliya, ka cafinayso. Waxa socda waa dulsaarkii deynta in meel la saaro. International Monetary Fund iyo World Bank, midkoodna Soomaaliya, deyn kuma lahan, deeqna ma siiyaan. Waayo World Bank iyo IMF, deyn iyo deeq ma […]
Talaado November 12, 2019 (AW.COM)-Daadad xoog leh ayaa ku fatahay gobollo ka mid ah wadanka Ingriiska. Degmada Fishlake ee ka tirsan gobolka Koofurta Yorshire ayaa ka mid ah goobaha ay daadadku sida weyn ugu fataheen. Raisulwasaaraha Britian Boris Johnson, ayaa shir gudoominaya kulan degdeg ah oo uu la yeelanayo heyadda […]